Basic Photography (အခြေခံ ဓာတ်ပုံပညာ)	HomeBlogsBasic Photography (အခြေခံ ဓာတ်ပုံပညာ)Hello, Guest! Join Login Actions
25.08.2010 (1001 Days Ago)
Tags: ၁၈၃၉ ခုနှစ်မှာ သိပ္ပံပညာရှင် Sir John F.W. Herschel က Photography ဆိုတဲ့စကားလုံးကို စတင်တီထွင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ Photography ဆိုတာက ဂရိဘာသာစကား Photos(light=အလင်း) နဲ့ Graphein (to draw = ပုံရေးခြင်း) ဆိုတဲ့ စကားလုံးနှစ်လုံးကို ပေါင်းစပ်ပြီး သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဓာတ်ပုံပညာ(Photography) ဆိုတာ အလင်းကို အသုံးပြုလို့ ပုံရေးဆွဲခြင်း ပါပဲ။ အဲဒါကို ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အလင်းနဲ့ ပုံတွေ ရေးဆွဲတော့မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးလိုအပ်တာကတော့ ကင်မရာပါပဲ။ ကင်မရာတွေအကြောင်းကို နောက်ပိုင်းပို့စ်တွေမှာ ဆက်ပြီး ရေးပြပါဦးမယ်။ တတ်သလောက် မှတ်သလောက်ပေါ့လေ..။ မှားတာတွေ့ရင်လဲ ပြင်ပေးကြဦးနော်..။
minhtawpaing wrote 411 Days Ago (neutral) 0
sawjohn wrote 932 Days Ago (neutral) 0
NyiSu wrote 978 Days Ago (neutral) 0
arr payy par tal byar...thanks fro sharing bro =D
Harry wrote 983 Days Ago (neutral) 0
jux saw this bro. Nice one =) thanksalot
ZayYarHlaing wrote 1000 Days Ago (neutral) 0